Umhambisi wamanzi → Ukomelela • Iigyms • Ukusela amanzi kwiGym Warsaw
Ngaba uyayifuna into yokuhambisa amanzi kwiiklabhu zokuzilolonga, iindawo zokuzilolonga? Inkampani yaseWater Point ibonelela izihluzi zamanzi ezingenabhotile, baseliUmthombo weenkokheli zehlabathi kumzi mveliso, apho sisasaza yedwa ePoland.
Imisebenzi yezemidlalo kunye nayiphi na imithambo yomzimba ibangela ukuba umzimba wethu ulahle ngokukhawuleza amanzi kunye neeminerals ezixabisekileyo ezifumaneka kuyo. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuzigcwalisa rhoqo ezi zithako kwaye unakekele amanzi omzimba kunye nokuma kwezimbiwa.
Oku kuququzelela ukufikelela okungenamkhawulo kumanzi acocekileyo kunye acocekileyo ngexesha lokuzivocavoca ngokomzimba. Ukucocwa ngokufanelekileyo, ukucocekile kwaye kutyebile kumanzi anezimbiwa zemvelo kunokufumaneka rhoqo kwiiklabhu zokuzilolonga kunye neendawo zokuzilolonga ngenxa yokuhambisa amanzi okusela namhlanje.
Abantu abasebenzisa iiklabhu zokuzilolonga, kunye nabantu abasebenza apho, baya kuyithanda incasa kunye nokutsha kwamanzi afumanekayo asuka kumatshini okuhambisa amanzi.
Izicoci zamanzi zokusela ezingenasylyl ezixhunyiwe ngqo kwinkqubo yokubonelela ngamanzi zinika amathuba okusetyenziswa okungapheliyo kunye nokungabinangxaki kwamanzi acocekileyo ngexesha leeklasi zokuzilolonga okanye ikhefu phakathi kwazo.
Uyilo lwale mihla lwee-dispensers olufumanekayo, oluhambelana ngokugqibeleleyo nayiphi na ingaphakathi leeklabhu zokuzilolonga kunye neendawo zokuzilolonga, sisibonelelo esongeziweyo apha.
Ezo zixhobo zingabekwa nakweyiphi na indawo yeklabhu yokomelela komzimba, umzekelo, kwindawo eyenzelwe ukuphumla okanye ngqo ejimini.
Kuyaziwa ukuba ukuze ugcine impilo kunye nenani elisempilweni, kufuneka usele amanzi okungenani iilitha ezi-2 ngosuku, kwaye ngexesha lokuzivocavoca umzimba, iimfuno zomzimba wamanzi zanda kakhulu kwaye inani lazo kufuneka lenyuswe.
Amanzi abandakanyeka kuzo zonke iinkqubo ze-biochemical emzimbeni wethu. Ukufudumeza okwaneleyo komzimba kukuvumela ukuba usebenze kwaye uzilolonge kakuhle. Ukusela amanzi ngexesha lokuzilolonga kuphucula ukusebenza kakuhle komzimba kunye nokwenza uqeqesho. Isixa samanzi aselwayo ngexesha leeklasi zokuqina komzimba kuxhomekeke kubude kunye nobungakanani bomthambo, kunye neqondo lobushushu elikhoyo.
Kubantu abaqeqeshayo, indawo abaqeqesha kuyo, imeko yayo yezixhobo kunye nezixhobo zibalulekile. Namhlanje, ingqalelo enkulu ngakumbi ihlawulwe kwindlela yokuphila esempilweni, ke kuyaqwalaselwa ukuba indawo yokutyela iyakwazi ukubonelela ngokuthuthuzelwa, i.e.amanzi amatsha afumaneka ngexesha loqeqesho.
Isisasazi samanzi okusela siyakwazi ukufezekisa oko kulindelwe, ke ngoko sonyusa umtsalane kunye nokuhlonitshwa kwendawo.
Isitshabalalisi samanzi sibuyisela isisombululo sesiko samanzi anezimbiwa. Izixhobo zokuhambisa amanzi okusela zisetwa kwiinkampani, indawo yokuzivocavoca kunye neeklabhu zokuzilolonga ukonyusa intuthuzelo yokuhlala kwezi ndawo, kwaye ezona zixhobo zikumgangatho uphakamileyo ezisetyenziswayo ekuvelisweni kwezi zixhobo ukongeza ubenza zibe ngumhlobiso wamagumbi.
Amanzi anikezelweyo ahlala esanda kwaye ecocekile.
Iziphuzo zokuhambisa amanzi sisisombululo sendalo kunye nexabiso eliphantsi, kwaye ngenxa yoko zibonakala rhoqo kwiindawo zoluntu, amaziko, iiofisi nakwiiklabhu zokuzilolonga kunye neendawo zokuzilolonga.
Iitekhnoloji zanamhlanje ezisetyenziswayo kulwakhiwo lwee-dispensers zivumela umsebenzi olula kakhulu.
coca kwiklabhu yokomelela komzimbaamanzi acocekileyo kwindawo yokuzivocavocaamanzi asimahla ejiminiisasazi samanzi kwindawo yokuzivocavocaImithombo kwiklabhu yokomelela komzimba.Intwasahlobo yeklabhu yokomelela komzimbaI-pitniks kwiklabhu yokomelela komzimbaisiselo kwiklabhu yokomelela komzimbaamanzi kwindawo yokuzivocavocaamanzi kwiklabhu yokomelela komzimba